Imigangatho | May 2022
Umthi okanye ikhaphethi yegumbi lakho lokuhlala? Landela ezi ngcebiso
Ikhaphethi, umthi oqinileyo kunye nobunjineli, i-laminate, kunye neethayile ze-vinyl zodidi- fumana umgangatho omnandi kwigumbi lakho lokuhlala kunye nezi meko zangoku.
Iithayile zomgangatho wePorcelain- izinto ezi-6 zokwazi
Iithayile zeporcelain ziluhlobo oluxineneyo, olomeleleyo lweceramic. Ifotwe kubushushu obuphezulu kuneetiles zeceramic, azinangqondo, zilula kwaye zibhityile.
Uboya okanye iPolypropylene Carpet? Iinkonzo kunye neengozi zendalo vs umntu zenziwe iindidi
Uboya okanye ikhaphethi yeplypropylene? Lowo ngumbuzo ongaphantsi esiwubuzayo sonke xa kuziwa ekukhetheni uhlobo olululo lwekhaphethi yekhaya lethu. Jonga izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga kuhlobo ngalunye.
Izimvo ezili-15 zomgangatho omangalisayo: iinkuni, iikhaphethi kunye neethayile
Phumeza inkangeleko entle kunye neendlela zamvanje zomgangatho kunye nemibono efanelekileyo kwigumbi ngalinye lekhaya lakho ...
Uyenza kanjani iStencil ngomthi okanye kumgangatho wekhonkrithi- Imizobo yepeyinti yokupeyinta eneStencils
Iveki enkulu yeprojekthi ye-DIY, oku kukhawuleza, kulula kunye neendleko ezifanelekileyo kumgangatho wepeyinti kufanelekile kumgangatho wekhonkrithi kunye nasemgangathweni. Landela eli nyathelo ngenyathelo ukusuka kwiRust Oleum UK.
Iingcebiso ezintathu eziphezulu zokucoca nokunyamekela ikhaphethi yakho entsha
Gcina ikhaphethi yakho icocekile iminyaka ezayo nala macebo aphezulu.
Isiteji sekhaphethi: Iingcamango zekhaphethi ezili-14
Ngaba ujonge iikhaphethi zezinyuko kunye neembaleki ukuguqula izitepsi zakho? Ukusuka kwimivimbo ukuya kwi-beige yakudala, nika ikhaya lakho uhlaziyo olukufaneleyo ngekhaphethi entsha.
Konke oya kuze ukwazi ngekaphethi
Ukusuka ekukhetheni isitayile sekhaphethi kwizinto ezifanelekileyo zekhaphethi kunye neengcebiso zokucoca ikhaphethi- iingcali zabelana ngeengcebiso zazo zeengcali
Uyikhetha njani iRug egqibeleleyo kwigumbi ngalinye lekhaya lakho -Izimvo zomgangatho
Iingcebiso zeengcali eziphezulu ekukhetheni ityali elungileyo, ukusuka kubungakanani ukuya kuhlobo lwezixhobo, nendlela yokubeka, ukubeka kunye nesitayile sombhoxo ekhayeni lakho- nokuba ligumbi lakho lokuhlala, igumbi lokulala okanye ikhitshi.
ICa 'Pietra' Yazisa ngokuQokelelwa kweTayile ePhefumlelweyo
Inkampani yamatye endalo uCa 'Pietra isandula ukumilisela ingqokelela entsha yethayile ekhuthazwe zodongwe olwenziwe ngesandla olufunyenwe e-Itali.
Imizobo enemibala yamagumbi okulala
ngaphambi nasemva iikhabhathi zasekhitshini
ubomi bokwenyani amabali amnandi